'लिभिङ टुगेदर' लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ : मातृका यादव - DURBAR TIMES
HomeNews'लिभिङ टुगेदर' लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ : मातृका यादव
‘लिभिङ टुगेदर’ लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ : मातृका यादव
H.E. Mr. Matrika Prasad Yadav, Minister for Industry, Commerce, and Supplies, Nepal attends the « Ministerial Roundtable: LDCs and Business Executive » during the World Investment Forum 2018, Palais des Nations. UNCTAD Photo by Violaine Martin
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भएको छलफलमा सांसद यादवले लिभिङ टुगेदरलाई दर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले समितिमा भने, ‘लिभिङ टुगेदरको पनि दर्ता गरियोस् । यो अस्थायी बिहे हो । चोरी-चोरीकन बस्छन् र अपराध हुन्छ । यी विषयहरूलाई क्लियर गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै सांसद यादवले विवाहको उमेर पनि घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता-२०७४ मा केटा र केटी दुवैका लागि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । यादवले समितिमा भने, ‘विवाहको उमेर घटाउनै पर्छ । पहाडमा त के हो के हो मधेसमा त उमेर घटाउनै पर्छ । युरोपमा त पढ्छन् र ढिलो विवाह हुन्छ । हाम्रो मधेसमा त गरिबी छ । बढी उमेर भयो भने त गाह्रो हुन्छ । दाइजोलगायतले पनि गाह्रो हुन्छ । पढाउन गाह्रो छ।’ यादवको भनाइमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७४ मा यस्तो कानुनी व्यवस्था छ, ‘शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिनेः (१) दफा ६९ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ ।’
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विद्यमान कानुनमा शारीरिक सम्पर्कका लागि १८ र विवाहका लागि २० वर्ष तोकिएकाले पनि समस्या निम्तिएको बताए । उनले यसमा केही हेरफेर हुनुपर्ने पनि बताए ।
Previous articleटेलिकमको अफर : १२५ रुपैयाँमा ४ जीबी डेटासँगै भ्वाइस कल
Next articleयस्ता Code भाषा प्रयोग गर्छन् पाकेटमारहरु (भिडियो)